Dalxus Media Group » XOG: Villa Somalia oo Gacan Sedexaad Dalbatay inay soo faragaliso Khilaafka KenyaDalxus Media Group
Warar hoose oo ay heshay Wakaalada Warqaad.com ayaa sheegaya in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay Warqadu dirtay Urur Gobaleedka IGAD iyadoo ku codsaneysa in gacan sedexaad ay soo fara galiso Khilaafka sii xumaanaya ee kala dhaxeeya Dowlada Kenya.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Dowlada Kenya ay ku hanjabtay in Cunaqabateyn ay saareyso Soomaaliya, waxaana Dowlada Federaalka ay dooneysaa inay iska fogeyso eed kaga timaada inay hurineyso Muranka labda dal oo meeshii ugu xumeyd maraya.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa Warqada ay u dirtay IGAD waxay ku sheegtay in Dowlada iyo Shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin wada hadal iyo isfaham dhex mara Labada Dowladood ee deriska.
Villa Somalia ayaa dhinaca kale Urur Gobaleedka IGAD kaga digtay Hadalada ka imaanaya Dowlada Kenya ee aan muujineyn deris wanaaga in Soomaaliya ay ka bixin karto Jawaabo la mid ah hadii ay sii socdaan balse waxay wali rajo ka qabtaa Dowlada Soomaaliya in tabashooyinka jira Wada hadal lagu dhameeyo.
Urur Gobaleedka IGAD ayaa hore Dowlada Kenya ugu gudbiyay in Shir deg deg ah laga yeesho Khilaafka labada Dowladood laakiin Dowlada Kenya ayaan dhag u dhigin qorshahaasi iyadoo u muuqata in aysan wada hadal diyaar u aheyn.
Si kastaba ha ahaatee waxaa laga warsugayaa Go’aanka Urur Gobaleedka IGAD ka qaadan doono Warqada ay Dowlada Soomaaliya u dirtay oo arrimo badan looga hadlay.